Trump: Waxaan hayaa cadeyn sheegeyso in Corona-virus Sheybaar shiinaha kuyaal lagu sameeyay. - NorSom News
Trump: Waxaan hayaa cadeyn sheegeyso in Corona-virus Sheybaar shiinaha kuyaal lagu sameeyay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu hayo cadeyn muujineyso in xanuunka Covid-19 lagu sameeyay sheybaar kuyaal dalka Shiinaha.
Trump oo arintan dhowr mar si maldahan uga hadlay, ayaa waxaa su´aal weydiiyay wariye, xili uu shir jaraa´id ku qabanayay aqalka cad:
“Ma waxaad aragtay waqtigan wax kalsooni sare ku siinaya in Mac-hadka Wuhan ee arrimaha Virology-ga uu meesha asal ahaan lagu sameeyay fayraskan?”
Trump ayaa sidoo kale eedeeyay hey´addah caafimaadka aduunka ee WHO.
Goor dambe oo hadana la waydiiyay inuu hadalkiisa kala caddeeyo, ayuu Trump yiri: “Taas kuuma sheegi karo. La iima ogola inaan middaas kuu sheego.”
Waxa uu weriyayaasha u sheegay: “Haddii iyagu [Shiinaha] uu si khaldan u sameeyay, ama si khaldan uu ku sii bilowdayba markaas ayey khalad kale sameeyeen, ama qof ayaa si ku talagal ah wax un u sameeyay?
“Ma garankaro sida sida dadka aanan loogu ogolaan inay tagaan qeybaha kale ee Shiinaha, hasayeeshee loogu ogolaaday inay tagaan qeybaha kale ee dunida. Taasi waa mid xun, taasna waa su’aal adag oo ay tahay inay ka jawaabaan.
Previous articleNorway oo mudada ilaalinta xuduudeeda sii kordhisay.
Next articleFHI: Jawaabaha su´aalaha ugu badan ee covid-19 oo af soomaali ah.